Miaraka amin’i Hil Chaffre. : maneho ny talentany ny mpitendry malagasy | NewsMada
Miaraka amin’i Hil Chaffre. : maneho ny talentany ny mpitendry malagasy
Zamba, mpitendry valiha ; Tinakely, mpitendry angorodao ; Bera, havanana amin’ny kabosy sy gitara beso ; Rina, mpitendry gitara beso ihany koa ary i Mendrika, tsy zovina intsony amin’ny fivelesana ampongamaroanaka…
…Tanisaina eto ireo mpitendry zavamaneno malagasy ireo, satria notsongaina mpanakanto renione, Hil Chaffre, hiara-hiasa aminy. Namolavola tetikasa iray ity mpihira renione ity, izay efa nivahiny sy nanatontosa rakikira teto amintsika. Navondrony anaty tarika iray izy ireo ary namokatra hira maromaro. Anisan’izany ny hira mitondra ny lohateny hoe « Ti fleur fanée … », niarahan’izy ireo tamin’ny ankizy mpianatra ao amin’ny sekoly Philibert Commerson, any Bretagne-Frantsa. Hita ao anatin’ny vokatra ny fironana samihafa amin’ireo Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Misongadina kokoa ny valiha sy ny angorodao.
Notanterahina, ny asabotsy teo, ny dingana manaraka ao anatin’ity tetikasa ity. Tsy inona izany fa ny fanehoana an-tsehatra ireo hira niaraha-nanatontosa. Tany Bretagne io fampisehoana io ary tafiditra ao anatin’ny hetsika antsoina hoe « Kabarkartié ».
Hatramin’ny 29 septambra izao, handeha hitety toerana maromaro any Bretagne ny tarika, hampahafantatra ny mombamomba azy ireo. Hamarana izany ny « cabaret », ny 1 oktobra tolakandro.